Apple inosimbisa kuti inoderedza zvishandiso nematambudziko ebhatiri IPhone nhau
Apple inosimbisa kuti inoderedza zvishandiso nematambudziko ebhatiri
Mushure memazuva ekutaura nezve mukana wekuti Apple yanga ichideredza pasi maPhones ekare nemaabhatiri akafa iyo kambani yanga isina imwe sarudzo kunze kwekubuda uye kujekesa nyaya iyi kuti imire kufungidzira nezvayo. Uye chokwadi ndechekuti, sekuratidzwa kwakaitwa bvunzo, Apple inobvuma kuti iri kugadzira iPhones ine mabhatiri asina kukwana kuita zvishoma nezvishoma.
Kutanga Reddit, kozoti Geekbench uye ikozvino Apple: kana yako yekare iPhone ikashanda zvakanyanya mushure memakore akati wandei, usaenderere mberi nekuremekedza marongero, usadzorere iOS 11 zvakare kana kupenga uchitsvaga maitiro ekuodha pasi kune iOS 10. Funga kushandisa € 89 kushandura bhatiri nekuti ndiyo inogona kunge iri mhinduro chaiyo kumatambudziko ako. Apple inotsanangura zvikonzero zvayo.
Chinangwa chedu ndechekuti mushandisi anakirwe nerakanakisa ruzivo neiyo iPhone yavo, uye izvo zvinosanganisira kwete chete iko kuita asiwo hupenyu hwemidziyo yavo. Lithium mabhatiri anova asinganyanyo shanda kana uchibata nekushandisa maturakiti pavanosangana neakaderera tembiricha, kana kana ivo vapfuura rimwe zera. Izvi zvinogona kukonzera kuti mudziyo uvhare zvisingatarisirwi kuchengetedza zvinoriumba.
Gore rakapera isu takaburitsa chinongedzo cheiyo iPhone 6, 6s, uye SE iyo yaizodzora iwo ekushandisa kwepamusoro pazvinenge zvakakodzera kudzivirira kuti mudziyo usadzime. Iye zvino takawedzera chimiro icho kune iPhone 7 ine iOS 11.2 uye zvirongwa zvedu ndezvekuunza zvishandiso zvitsva mune ramangwana.
Aya mazwi ndiwo akaburitswa neApple uye mairi inotsanangura kuti nei ichigadzira michina yayo yekare kudzikisa mashandiro avo kana bhatiri ratopera. Tichifunga nezvekuti mabhatiri akagadzirirwa kuchengetedza makumi masere emakumi emazana emazana ematanho awo (nemutero wezuva nezuva zvinogona kunge zviri gore nehafu zvimwe kana zvishoma), tinogona kusvika pakufungirwa matambudziko anotanga kuve akakomba kana yako iPhone iine makore maviri ekuberekwa. Panguva iyoyo iyo system pachayo, ichiziva kuti bhatiri haisisiri pakunaka kwayo, inoita simba reiyo yako iPhone kudzivirira bhatiri kubva pakuita kuyedza iro chairo risingakwanise kuitazve.
Sezvatakakuudza mazuva ano, kana yako iPhone iine makore maviri kana kudarika, uye iwe ukaona kuti haichashandi zvakatsetseka sepakutanga, unofanirwa kufunga nezvekuchinja bhatiri. Mutengo weApple i € 89 muzvitoro zvayo zvepamutemo kana mune akavhenekerwa ehunyanzvi masevhisi, mari iyo mushure memakore maviri ekushandisa, kana ichinyatsodzosera pwere kune yako iPhone, ichave inopfuura yakachengetwa zvakanaka.
Iyi danho rakaitwa naApple rine musoro zvachose. Kufanana nayo kana kwete, lithiamu mabhesheni ane hupenyu hwakaganhurirwa, uye zvinosuruvarisa kuti haina kureba kwazvo. Hazvina mhosva kuti Apple inoda kuchengetedza huremu hwezvinhu uye kudzivirira yako iPhone kubva kukusiya iwe wakarara pane yekutanga shanduko. Chii chinofanirwa kuvandudzwa kutaurirana nemushandisi, izvo Une kodzero yekuziva chakashata ne iPhone yako, zvikonzero nei isingachashande sepakutanga, uye zvakare uine mukana wekugadzirisa dambudziko, izvo zvakafanira kuti uzvizive. Chiziviso chinoratidza kuti bhatiri riri mune yakashata mamiriro uye kuti zvingave zviri nyore kuchichinja hachizokuvadza, chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inosimbisa kuti inoderedza zvishandiso nematambudziko ebhatiri
antonio david akadaro
Icho chinyorwa chisingaite sesainzi kwandiri ... bhatiri ... chinja icho ... ndinofunga isu hatisi kutsvaga, kana mudziyo uchishanda nezuva X ne iOS 10 uye zuva X + 1 harichashandi zvakanyanya neIOS. 11, hazvaizoita zvine musoro kufunga kuti dambudziko riri muIOS 11?. Ndine iPhone 6s ine iOS 10 uye ichiri kundishandira, nekuti ini ndangosiya iOS 10, saka handichinje bhatiri.
Chinyorwa chakaipa uye tsananguro dzakaipa.
Pindura kuna antonio david
Asi zvakare zvine chekuita neruzivo rwevashandisi. Chinyorwa ichi chakanakira vese panguva yavaizopemberera kuti Apple yaisa chiziviso kana bhatiri risingacharemekedze mitengo inodiwa yekuchaja sisitimu inoshanda.
Ndine ma6s ane iOS 10 zvishoma zvadzimira zvakadzimwa ne27% bhatiri uye dzimwe nguva nezvakawanda kana zvishoma.
Yambiro yekuchinja bhatiri yaizokwana.
Ndakatenga iyo iPhone 6s muna Gumiguru 2015, gore rimwe uye mwedzi mitanhatu gare gare Apple yakandiudza kuti ndinofanira kuchinja bhatiri nekuti paive nekutumirwa kwe iPhone 1s ine bhatiri rakakanganisika (zviri pachena mahara). Iye zvino ndine iPhone 6s ine bhatiri ine mwedzi mishanu chete uye ini ndichiri paIOs 6, ndinofanira kuigadziridza kune iOs6 sezvo munhu achagara nhaka yangu iPhone ane iPhone ine iOs 5 uye sekuziva kwako, makopi ekuchengetedza chete yacho inogona kutakurwa maIO kana kupfuura ……
Ndinovimba kuti bhatiri rangu kuva "nyowani" harina matambudziko aya… ..
Ini ndinonzwisisa zvakataurwa nevanhu vanogunun'una nezvekuti zvinogoneka sei kuti iPhone ine 1 zuva rekusiyana uye nemusiyano chete werudzi rweIO iyo yaunotakura mukati mayo, bhatiri rinoburitsa zvakasiyana, kunyangwe kubva pane zvinotaurwa naApp ane " yakagadzira "iyi iOs 11 ye iPhone ine A11 bionic chip, iyo isiri iyo neIOs 10. Zvinogoneka kuti iOs 11 inoda nhevedzano yemamiriro ezvinhu chaiwo kuti iwane muto mumwe chete kubva mubhatiri sezviri mumaIO 10, tinogona kunyunyuta kuti Apple inofanirwa kutora hanya zvakanyanya nezvezviitiko izvi, asi kubva pane izvozvo zvekufungidzira kuti iko kukanganisa kuri kwega uye kweIOs11 yakawanda yekufungidzira.
Ndinewe… ndaive ne iPhone 3G, yakagara kwemakore, ndakaichinja kuita 4S, yakatora makore akatowanda. Ndakapedza nguva yakawanda ndichitenga iyo iPhone7 ndiine chivimbo chekuti yaizonditorera makore mashoma kana ndikaibata mushe, sepakutanga ... uye ikozvino, risingasviki gore mushure mekunge ndatenga, apo apuro iri kunze kwep *** tas, zvinondinonokera pasi ... nevaviri ...
Uye iwe unogara uchipisa ... ini ndave kutanga kuve ndakanyanya kusvika kumawebhusaiti emaapuro nemitemo yavo, mitengo yavo, kusakwana kwavo, yavo iOS iyo inodzima nhare dzavanoda / kusarudza ... uye iwe unotamba mvura yavo neaya zvinyorwa.
Zvakakomba, ini ndasara neashoma kuti ndirambe ndichiombera pasita uye hutano ne manzanita de marras. Uye kushaikwa kwako kwekushoropodza kwavari kuri kundibatsira zvakanyanya kuti ndirambe hucksters ava.
Ini ndinobva ku7 plus uye ikozvino ndine X uye chokwadi ndechekuti ini handicherechedze musiyano wekuti 7 plus inodzora, zvakangofanana neX mhino .. chubhu zvakare ma6 ane ios 11 uye nakisisa, handifunge kuti bhatiri rinokanganisa system ipfungwa yangu pachezvangu.
Vhiki rapfuura OS yangu yakarovera pandakavandudza kune yazvino vhezheni yeIOS. Maawa akati wandei kuyedza kumuita kuti adzore (aisada murume akapiwa mhosva) uye ini ndakaiwana. Kubva ipapo zvave zvishoma zvishoma. Mumazuva ano ndichaedza kudzoreredza kuti ndione kana kuchigadzirisa asi zvinoita kunge zvisiri izvo….
Samsung yaizovhura mutauri wayo neBixby mukati mehafu yekutanga ya2018
Apple Park Inoratidzwa Inenge Yakapedzwa muZvekupedzisira Drone View Vhidhiyo